NAMNI EJJANNOO QABU, QILLEENSA YEROON HIN RAAFAMU !!! -
NAMNI EJJANNOO QABU, QILLEENSA YEROON HIN RAAFAMU !!!
Ilmaan Oromoo gadi-jabeessanii hubachuu kan qaban, wayyaaneen, wareegama ulfaataa kafalaa jirru ilaaltee, akka garaa nu laaftuu ykn marii karaa nagaa jedhamutti harkisuuf ykn hawaasi addunyaas, haala kana nu hubattee, harka akka nu irra qabdu ykn wayyaanee irratti dhiibbaa akka taasiftuuf qofaa akka hin taaneedha. Qabsoon keenya sadarkaa kana irra dabreera. Wareegamni haalaan qaalii ta’ee kafalaa kaa jirruuf, wayyaanee hidda ishee waliin Oromiyaa keessaa fi Ummattoota cunqurfamoo irraa buqqisuuf ta’uu adda baafatanii beeku qaban. Wareegamni har’a ijoollee qacaleen ykn ol-guddattuun kafalaa jirru ulfaataadha. Wareegamni qaalii kun, waan araaraa fi jettee jettee namootaan wal bira qabnee falaasama kan itti baayyifnuu miti. addunyaatti kan iyyaachaa jirruuf, har’a waan isinitti himaa jirru sirreessuu dhiiftanii, ykn sirna isin jiraachisaa jiratan hin sirreessitan taanaan rakkoon kana caalu dhufuu akka danda’uu hubadhaa jechuuf qofaadha. Sababaan adda duraa, humnoonni alaa wareegama qaalii nuuti kafalaa jirruuf waan wal gitu hojiin argisiisuu jennee abdii guutu irraa hin eegnu. Wareegama lubbuu nuuti kafalaa jirru irra, dantaa isaanii akka dursan waan beekamuuf, Wareegama ulfaataa gama hundaan umamuu danda’uuf, itti gaafatamummaa hin qabnuu jennee beeksifachaa jirra malee, karaa nu haaxaa’aatii waan barbaannutti nu qajeelchaa jechaa hin jirru. Kana qalbifachuu dhabuutu haasaa qilleemsa yeroo waliin dhufuun raafamaa jiraanna.
Qeerroo fi Ummati Oromoo Fincila diddaa Gabrummaa Baatii 5 dura bifa haaraa fi murannoon yennaa eegalan, yaadoota hedduutu dhihaataa ture. yaadoonni sun maal akka ta’anii fi sochiin qeerroo fi Ummatichaa maal irra akka jiru hundatu ijumaan daawwachaa jira. Qabsoon Oromoo guyyuu jabaachaa fi kan duuba hin deebine ta’uu isaa fira miti halgaayyuu amansiisee kadhaatti akka gadi taa’aan taasiseera. Qabsoo kana kana dhaabu kadhaa fi arraba miidhagfachuu ykn hololaa fi doorsiisa osoo hin taanee, Mirga hiree murteeffannaa Ummata Oromoo ta’uun ifatti kaa’ameera. Humni kana murteeffatee, Taankii fi Aga’azii falmaa jira. Kan kana hin murteeffanne ammoo haasaa fi jette jettee namaan atakaaroo seenaa jira. Barruunkoo har’aa, Namoota jette jettee fi dhiiga kafalamaa jiru waliin madaalanii ejjannoo dhabanii of takaalaa jiran irratti xiyyeeffata. Sadarkaan qabsoo fi qalbiin Ummata Oromoo irra jiru, shiraa fi holola waliin dhooftootaan ykn bilchina dhabdootaan kan fashaluu miti. Qabsoo Oromoo dhaabuu kan danda’uu akka kaleessaa du’aa fi hidhaa dheessu miti. Kun injifannoon keessa dabarree jirra. Dhaabbitti du’uu irra, jireenya dhaabbitti du’uun wal hin caallee irra, jireenyaa fi gubannaa uffataan golguu irra, dhaloota seenaa hojjatanii du’uu filataniin bakka buufamee, Gootummaan itti boonnu hojjatamaa jira. Gootummaan kana caalu akka itti fufu shakkiin tokkollee hin jiru.
Inni lubbuu isaa kennee jiru murannoo fi gootummaa kanaan of masakee seenaa galmeessaa jira. Inni jette jettee fi holola rakasaan of takaalaa jiraatu, yaadda’uu, sadarkaa qabsoon Oromoo kun irra jiru wallaalu irraa ta’uu nama hin shakkisiisu. sammuu dabeessaa sochiin har’aa duubattii deebi’inaa laata? jedhee miidiyaa adda addaa irratti atakaaroo waan nuuti irra dabarree seenaa dhalootaa galmeesisaa jiru hin ginneen wal dhamaasaa jiraatu maal akka jedhamu namaaf hin galu. NAMNI EJJANNOO QABUU, QILLEENSA YEROON HIN RAAFAMUU!! jedhee mata duree barruu kiyya har’a kanan filadheef kanaafii. Yaada namaa yaadaan morkuun, ilaalcha namaa, ilaalcha ofiin gilgaaluu, ummta barsiisuun waan jiraati. Garuu mata duree adda addaa kaasanii tapha ijoolleen wal dadhabsuun dhugumatti waggaa 150 boodallee barachuu dhabuu keenya mirkaneessa malee waan haaraa hin qabu. Kun ammoo qaaniidha. Har’a mata duree diinaan adeemsa keenya gufachiisuuf umamu irra, kan ofii uumnee humna wal buufnuutu caala. OROMOO ! Sochiin kamiyyuu eegalu, hololli kamiyyuu oofamuu hidda MORMAA yaaftee sammuun dhiphachutti hin fiigiin. Waan argite ykn hubattee yoo jiraatee, waan keessa jirruun wal gitaa ? eessaa ka’ee? ? garamitti deema ? eenyuun ka’ee ? maaliif ? kaayyoon isaa maaliii ? kkf jedhaatii of gaafadhaa. dubbii akka hurrii ykn fixeensa ganamaa mul’atee baduuf mataa of hin dhukkubsiin. Obbo Girmaa W/Gorgis har’a ka’ee , afaan oromoo kan miidhee, qubee Laatiniiti yoo jedhee, kan ilaaluu qabnuu , qubee Oromoon fudhate ta’uu waggaa 25 dura mirkanaa’uu fi gaaffiin keenya har’aa qubee saabaa fi Laatinii osoo hin taanee, Mirga hiree murteeffannaa ta’uudha. Har’a sadarkaan nuuti irra jirru, isa qabnu dhabnaaf miti. isa nu hafee kabachiisuufii. Nuutu har’a diina garaa laaffifataa jiraa miti. halgaatu ykn diinatu hegaree isaaf jedhee gaaffii keenya fudhachuu akka qabu lubbuu itti gabbaraa jirra. Ummati oromoo hireen isaa eenyunu hin murtaa’uuf. Isa mataa isaatu wareegama isaan haala itti murteeffatu mijeeffata. Kana kan naa ta’aa jedhee ni fudhata. Kan didee amala isaa waliin bakka ofii irratti murteeffatutti qajeela. Murteen dhaloota har’aa kanadha malee, Qilleensa yeroo waliin raafamu miti. har’a diinatu hegaree isaad yaadda’ee maraata malee, nuutu dhimma keenya fudhachiisuuf maraataa jirra miti.
Mee baatiima muraasa kana kessatti atakaaroo Intarneeta irraa fi midiyaa adda addaa irraa kaaseen haala keessa jirru waliin madaalaa .
Obbo Juwaar Mahaammad Ilaalchisee :- Obbo Juhaariin ilaalchisee mata dureen daangaa hin qabnee gama Oromoonis halgaanis ni ka’aa. Waggoota lakkofsiisaa jiras. Yaadaa fi ilaalcha adda addaa waliitti darbatu. Hunduu akka yaada isaatti waan itti fakkaate kaasa. Inni kaan ni balaaleffata. Kaan amma huubi qoonqoo mul’atuutti dubbata. Bara 2015 walakkaa kaasee dhimma obboleessa keenyaan wal qabatee, OMNis walitti hidhatee kan ka’aa ture inuma beekna. Deebi , Juwaaris dhageenyerra. ilaalleerra. Kan heedduu na raaju, wanni ka’uu hundumtuu xumura osoo hin argannee hanga har’atti mata duree biraan bakka buufamaa itti fufuu isaati. Kan halgaa kaayyoo qabaa yoo jennee , keenyawoo ? kun yoom dhaabbata ? akka dhuunfaatti, akka waloottis dhimmi kun amma yoomitti itti fufa ?dhuma irra maaliin goolabama ? kun eessaan nama ga’a ? abbaa isa ilaallatuuf furmaati dhumaa maalii ? atakaaroo siyaasaa kan ilaallatu miti. miidiyaa irratti deebii dhimma Ummata isaa ilaallatu kan deebisu miti. atakaaroo fi abaarsii ka’aaa jiru xumurri isaanii maalii ? Oromoon durii , warri beekumsa hin qaban jennuun sun, Nama Abbaa Gadaa waggaa 40 boodaa akka itti guddisan beeku. inni Abbaa Gadaa ta’uus waan Umurii isaa fi gadaan isaa hin hayyamiinif hin hojjatu. Ummatis Abbaa Gadaa atu hin ta’iin hin faarsu. Hin busheessus.manatti ol guddifatan. Keenya ammaa garuu gama lamaaniiyyuu hin jiru. dhumni isaa maalii ? Dagaleen utubaa malee hin rukutamu. Utubaan bakka isaa malee hin dhabbatu. Mannis bakka malee hin ijaaramu. Seeraa fi adeemsa keenya yoo hin tolfannee , bakka geenyu hin qabnu.
Junaddii Saaddoo ilaalchisee :- Junaddiin xurii seenaa ta’uu isaa innu amanee jira. Har’a ijoollee inni kaleessa lola irratti labsee dachaan du’aa osoo jiranii , mata duree biraa kaasuu fi irratti wal nyaachuun bu’aan isaa maalii ? eessatti waliin dubbatamee, badii fi gaarummaan isaa maaliin adda baafamee , akka seeraa fi heeraatti , akka aadaatti Maanguddoota kamitti dhihaatee haasa’ee , kkf yoom raawwateetu har’a mata dureen tolfameefii dhimma keenya nu gatachiisa ? Oromoo dhala isaatu jalaa dhumaa jira. Qabeenyaa fi eenyummaa isaatu badaa jira. Kan balleessuu abbaa qaba. kan galaafatamuu lubbuu dhala Oromooti. Bakka dhiiga dhangalaasaniiF gumaa hin baafneetti, maqaa ofii tolchuuf illee bakka hin hojjanneetti, aadaa warri beekna jedhanillee waliin gawwamanii yennaa mataa wal dhukkubsan nama gaddisiisa. Ijoolleen humni har’a ittin dhumaa jirtu kan junaddiin kaleessa gadi dhaabee ba’ee mitii ? kun hafeeyyuu mee waan har’a itti jirruu fi sadarkaa qabsoon keenya irra jiru waliin akkamiin wal gitee , dirree intarneetaa irratti dhiiga ijoollee keenyaatti cubbuu Junaddii irraa dhiquuf abballa ?
Abbootii Gadaa Masaraa wayyaanee seenan jedhame ilaalchisee :- asi irratti yaadoonni ka’an hedduu nama gaddisiisu. Midiyaa adda addaa irratti , mata dureen “Xiinxalaa siyaasaa” jedheemee namoonni adda addaa dhiheffaman dogoggora heeduu uumaa jira. Xiinxalaa siyaasaa addunyaan jettu yoo ta’ee waan barnootaa fi beekumsaan wal qabatuudha. Namni lafaa ka’ee xiinxalaa siyaasaa hin jedhamu. Namoonni miidiyaa irra hojjatan, mata duree kanaan namoota dhiheessuun rakkoo hedduu uumaa jira. Madaallii xiinxalaa siyaasaa kun maalii ? namoonni ani beekumsaa fi barnoota isaan qaban akka gaaritti beeku Xiinxalaa siyaasaa jedhamanii dhihaatu daawwadheera . waan hedduu nama gaddisiiudha. Namootuma kanatu abbootii gadaa irratti yaada adda addaa kenne. Xiinxaltoonni siyaasaa kun 6 hin caalan. Maaliif ? Inni kaan abbaa gadaan mataa gadi hin qabu jedha. Inni kaan lakkii innii abbaa gadaa miti jedha . inni kaan ammoo ummati ega waan jedhu barbaade ega fixate booda, abbootiin gadaa qabxii 10 dhiheeffatan jedha. Kan isa dubbise ammoo lakkii jarri sirrii gaafatani jedha. Heddu nama raaja. Mee kun bu’aan isaa maalii ?sochii qeerrootu gocha abbootii gadaa kanaan dhaabbataa sodaatamee ? sochii kana abbootii gadaatu eegalsiisee ? moo maalii ? kun dhiphuu wayyaanee argisiisuun ala kan mul’isu, hin qabu. Torban lama dura, abbootiin gadaa gocha wayyaanee balaaleffatanii jedhamee , gootummaatti afarsanii osoo torban hin turiin, masaraa mootummaa seenan jennee biyyeetti makna. Maaliif ? lakkii qilleensi yeroo nu hin raasini Oromoo.
Alaabaa Haaraa jedhamu ilaalchisee :-kunis waan raajiiti. Namni kana irratti wal fixeera. Alaabaa ABO har’a Ummati akka malee jaallatu kana , ABOn kun kan ummata Oromooti jedhee jala hin murree. Kanuma dhaabaa ta’uu kaa’aa. ABOn gaafa guyyaa hiree murteeffannaa Ummata Oromoo, ALAABAAN OROMIYAA kam ta’uu akka qabu Ummataaf dhiheessaa. Alaabaa jechuun hiree ofii jechuudhaa. Alaabaan kun dhiigaan kan dhuftuudhaa. Abbaan fedhe halluu sararee dhiheessuun osoo hin taanee, dura dhiiga kafalee firii dhiiga Sanaa Alaabaan mirkaneessaa . Bokkuun , baalliin, faachii , kkf seeraa fi heera mataa isaanii qabu . Alaabaan ABO miseensootaa fi hogganoota isaa biratti yennaa filatamuu fi fudhatamu seeraa fi heeraan mirkaneeffame. Alaabaa ABO Kora sabaatu mirkaneessa. Isayyuu sagalee guutuun. Alaabaa onnee nama seentee ba’uu diddee,fi ejjannoon kunis diina dhukkubsachiisee kun, galgala tokkon kan faayamtee miti. Gandummaa , Amantii , kkf irra bilisa taatee hojjatamtee. Isa kaan irraa bocamtee hin sirreeffamnee. Waggaa 40 dura tilmaama bara baraaf hojjatamtee hanga har’atti jaalatamteedha. Warri Alaabaa Oromoof finnee jedhanii dogoggoraniiru. Kaayyoon isaanii huccuu alaabaa filuu ta’uu hin danda’uu. Alaabaa Kiyya kan jedhu Ummata. Alaabaan Itoophiyaa hanga har’atti dhiiga dhangalaasisu kanaafi. Mata dureen ulaagaa akkasiif illee deebii hin laatiin maaf mataa nu dhukkubsa ? maaf jettee jetteen wal nu ficcisiisa ? namoonni waan rakasaa akkasii irratti mataa wal cibsinuu, maaliif pitishinii dhimma keenyaa irratti wal hin dorgomnu ? dhimma ijoolleen 300 ol itti dhumtee mallattoo nama 10,000 dhabee rakkoo uumaa hin jiru ? maaf isaaf ummata dammaqisuu irratti hin xiyyffannu ?
Qabsoon keenya wareegama Ummata keenyaan sadarkaa itti boonnu irra jira. Sadarkaa qabsoon keenya irra ga’ee jiru qixaa fi waan itti fufu maluun kan wal gituu yaaduu fi hojjachuu qabna. Qilleensi waan fidee waliin hin raafamiinaa. Qabxiilee arfan akka fakkeenyaattan kaase. Kanneen hafan jiru. mee of ilaalaa ! wareegama Biyya keessaa kafalamaa jiruuf kabajaa qabaadhaa. Lauubbuu dhala oromoo badaa jiruuf bakka laadhaa. Jette jettee fi atakaaroo ol guddattu seenaa hojjattu irratti hin katabiinaa. Akka dubbisanii fi daawwatan hin taasisiinaa . maaloo wal haa kunuunfannu . hamilee waliin haa taanu. Kun dhaamsa kiyya. Dhalootu har’aa Seenaa haaraa hojjachuuf bifa addaan qophaa’aa jiraa itti boonaa. Isa faarsuu fi deeggaruu qofaa osoo hin taanee, qaamaan yeroon bira itti dhaabbannu dhihaachaa jiraa of qopheessaa . kana irratti wal jajjabeessaa.
HORAA BULAA !!!!!!!!!! gobbuu2015@gmail.com / Burqaa430@gmail.com